Izizathu ezingenza ukuthi uthathelwe noma uthathele umngani isoka | News24
Anyone still claiming that the ANC is united under President Cyril Ramaphosa must please explain he and secretary general Ace Magashule can claim to work towards the same goal in the same organisation, writes Adriaan Basson.
Izizathu ezingenza ukuthi uthathelwe noma uthathele umngani isoka
Harare - Ukuthathelwa indoda into eyenzeka mihla yonke. Kungenzeka ukuthi kukhona omaziyo owake wathathelwa isoka ngumngani, mhlawumbe nguwe owathathelwa noma nguwe othathela abangani amasoka.
Nazi izizathu eziyishumi ezingenza ukuthi uthathelwe noma uthathele umngani isoka:
1 .Umona - Uma isoka lakhe noma elakhe linempatho nothando qaphela ikakhulukazi uma umngani engenalo isoka noma elkakhe lingaphathani kahle. Ngakho ke yeka ukutshela umngani wakho ukuthi likuphethe kanjani isoka lakho.
2. Uthando - Kungenzeka alithande isoka lakho, mhlawumbe nithanda uhlobo olulodwa lwabantu besilisa nomngani wakho.
3. Imali - Yini nje kodwa enye engenza umngani akuthathele indoda ngaphandle kwemali, uma isoka lakho likuphathisa okweqanda likwenzela konke nabangani bebona...ubobhasobha phela abantu bawuthanda kabi umnotho.
4. Ukunakekelwa - Phela wonke umuntu wesifazane uyathanda ukunakekelwa, anakwe futhi athandwe. Ngakho ke uma isoka lakhe likunakekela abangani bakho bengase balifune phela uwuhlobo lwesoka eliyimvela kancane.
5. Ukuzethemba - Phela uma umuntu wesifazane eziqhenya ngesoka lakhe, ekhuluma ngothando aluthola kulo nokumethemba ngokuthi akasoze akujolela...Khuzeka, uzifaka enkingeni.
6. Ububi - Abanye abangani banjalo, phela bakholwa wukuthi uma bona bengajabulile nabangani kufanele bengajabuli kanti abanye bengakwenziswa ukukubona uphatheke kabi. Abanye abangani banosathane, ngiyakutshela.
7. Ubumnandi - Hhayike bakhona abantu besifazane abathi babekwenzela ukujabula nje okwesikhashana, bechitha isizungu.
8. Injabulo - Iningi labantu besifazane alikwazi ukuziba noma ukuvimba ukuzwa ukuthi indoda iyibhubesi embhedeni noma inenduku enkulu bengase bafune ukuyozizwela nabo. Ungalinge utshele abangani bakho ngobubhubesi bendoda yakho embhedeni nangosayizi wenduku yayo.
9. Ubuwula - Abanye abantu besifazane bengase benze ubuwula benze okubi ngoba befuna ukukuzwisa ubuhlungu, mhlawumbe bakuthathele isoka. Qinisekisa ukuthi awucasuli muntu kubangani bakho...ingase ihambe indoda.
10. Ukungabi nalo isoka - Uma umuntu wesifazane engenalo isoka futhi engaphathekile kahle/ emuncu ngalokho, uyingozi loyo mngani ngoba isoka lakho lingase likushiyele yena. Ngakhoke uma unobudlelwano obuhle nesoka lakho umngani wakho engenabo lobobudlelwane futhi engenazo izindaba angase aizxoxe nawe...ihhe!, asazi!